China tofu katsi marara Kugadzira uye Fekitori | Bondhot
China inogadzira inoputika tofu katsi marara:
Main Nyaya Nyowani tofu kana chirimwa fiber
Chishongedzo Chinyorwa kofi bhinzi, green tii, huchi pichisi, inoshanda kabhoni
Saizi Kureba: 10-30mm dhayamita: 3.0mm
Chiyero cheguruva <5%
Kurongedza Kwemukati 6L kana 7L uye 18L
Kuisa zvinyorwa 1 Nemapallet
MOQ 9Toni kana gumi nematanhatu
Ruvara Green kana yakagadzirirwa
Brand Tinogona kutsigira OEM
Iyo Tofu Cat Litter Kubatsira
Yakagadzirwa nezvose zvakasikwa Tofu isina makemikari
Anoshamisa Odor kutonga
Zvinyoro nyoro pane ako katsi tsoka
99% Guruva Mahara
Zviri nyore kutora
Flushable uye nyore kurasa
Tofu katsi marara rudzi rutsva rwemhando yepamusoro yekati marara. Zvinotora kunetsekana uye kukuvadza kwezvakatipoteredza kukanganisa kunze kwekuchengetwa kwekiti! Iyo tofu katsi marara inogadzirwa chose kubva kune yakashandiswazve zvirimwa, uye inoita 2-3x zvirinani pane ivhu kana kristaro marara pakumedza uye hwema hwekutonga.
Hutano uye hwakachengeteka. Zvinoshamisa abosorption uye hwema kutonga. Aya angori mashoma eanoshamisa mafatesi ayo edu Anokura Pro Tofu Cat Litter anogona kuita! Uye nekuti mafomura edu haana ekugadzira ekuwedzera, makemikari, ivhu kana chero anonhuwirira ekuwedzera kana zvinonhuwira, unogona kuzorora zviri nyore uchiziva kuti kati yako haizokuvadzwe munzira ipi neipi!
Zvakanakira izvo zvese kitsi nevanhu vanogona kuona ipapo nekunzwa
Nemafomula akagadzirwa neasipo tofu uye 99% isina guruva inogadziriswa zvigadzirwa, unowana ruzivo rwakakura kwazvo uchiziva kuti iwe nekatsi yako hamuzokanganisike nematambudziko ekufema uye chero marasha ekati anoshandiswa anogona kuraswa nyore!
Guruva kusununguka, kuumbana, uye kuputika. Yakagadzirwa kubva ku100% zvese-zvakasikwa zvigadzirwa, TofuKitty inenge isina guruva, inonamira mumasekondi, inotora hunyoro 3x zvirinani kupfuura ivhu uye 2x zvirinani pane kristaro marara, uye iri 100% inoputika. Iko hakuna kwekutevera uye hapana guruva. Flush uye waita!
Nhatu-nhanho nongedzo yekuzorodza yako katsi yemarara bhokisi
Nhanho1: Zadza tsvina yakachena matereyi nechero imwe kusvika maviri masendimita (e2 - 5 cm) yeNurture Pro Tofu Cat Litter
Nhanho2:Bvisa macumpump uye urase zvine mutsigo. Ziva kuti Kukura Pro Tofu Cat Litter inogadzirwa nehutachiona uye inoputika zvishoma
Nhanho3: Wedzera zvimwe Kukura Pro Tofu Cat Litter kuti uvandudze marara ako bhokisi mushure mekubvisa tsvina.
Inokurudzirwa kuchengetedza angangoita masendimita mashanu emarara nguva dzese.
Empty yakazara marara tray yeatsva katsi marara kamwe chete pamwedzi.
Pashure: Natural katsi marara